2013 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Tuesday, December 31, 2013 Unknown3comments
iOS 7+ အတွက် မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက်ကို Developer များဖြစ်ကြသော ကိုသန့်သက်ခင်ဇော်၊ ကိုစေတန် နှင့် ကိုမိုးစက် တို့က သီးခြားစီ develope လုပ်ပေးထားကြပါတယ်။
အစကနဦး iOS7အတွက် ဖောင့်မရသေးခင်က ဖောင့်အဟောင်း "Zawgyi Font iOS" ကို သွင်းထားမိခဲ့ပါက အရင်ဆုံး "Remove" လုပ်ပါ။
iDevice များတွင် မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက် အတွက် Source နှစ်ခုကို သွင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အခြားသော Keyboard နှင့် Font များကို မသွင်းမိအောင် သတိပြုပါ၊ အထူးသဖြင့် "Zawgyi iOS 4.3 Font" သည် 100% Crash ဖြစ်စေပါသည်။
ဖော်ပြပါ မြန်မာစာနှင့် လက်ကွက် Install လုပ်နည်းသည် ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်စဉ် Crash ဖြစ်၍ Restore အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လုပ်ပြီးမှ သိရှိထားသောကြောင့် အဆင်ပြေ အချောမွေ့ဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်သည်ဟု သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Device ကို PC နှင့် မချိပ်ဆက်ပဲ DFU mode ဝင်ပါ။
DFU mode ရောက်သွားပါက iTunes နှင့် ချိပ်ဆက်ပါ၊ Restore လုပ်ရန် ညွှန်ကြားလာပါလိမ့်မည်။
iOS, App များ Crash ဖြစ်ခဲ့သော် iTunes နှင့် ချိပ်ဆက်ပြီး Restore ပြန်လုပ်ပြီးမှ Jailbreak တစ်ခါ ပြန်လုပ်ပါ။
Credit : မိုးသိကြား
SAMSUNG ဟန်းဆက်များ Android 4.3 သို့ ဗားရှင်းမြှင့်ရာတွင် သတိထားရန် လိုဟုဆို
Tuesday, December 31, 2013 Unknown2comments
လူကြိုက်များ ဟန်းဆက်အမျိုးအစား အချို့ဖြစ်သည့် SAMSUNG GALAXY SII,SIII, Note II တို့ကို Android Official Version 4.3 သို့ မြှင့်တင်ရာတွင် သတိထားရန် လိုအပ်လာကြောင်း သိရသည်။
“အခုနောက်ပိုင်း Note II တချို့ကို Official version 4.3 မြှင့်လိုက်ရင် ဖုန်းဟန်းဆက်ရဲ့ Network စနစ်တွေ ပျောက်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လို့ ၄.၃ ကနေ Downgrade ပြန်ဆင်းချင်ရင်လည်း boot Loader သေသွားတတ်တယ်။ Official Android version 4.3 က boot loader ကို KNOX နဲ့ Security ခံထားတော့ Downgrade ပြန်ဆင်းမရတာမျိုးတွေ ကြုံတတ်တယ်” ဟု Techvilla မှ ဆားဗစ်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
“4.3 ဗားရှင်းတင်ဖို့အတွက် တချို့ဟန်းဆက်တွေက Network IC မနိုင်တာကြောင့် ဗားရှင်းတင်လိုက်ရင် Network လိုင်း ပျောက်သွားတာမျိုး ကြုံတတ်တယ်” ဟု ဆားဗစ်ပညာရှင် ကိုအောင်ဇင်က ထပ်မံပြောကြား သည်။ Android version 4.3 ကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ် သုံးစွဲလိုသူများအနေဖြင့် Leak Version တင်ပြီးသာ စမ်းသပ်သုံးစွဲသင့်ပြီး SAMSUNG GALAXY SII,SIII,Note II များကို Official Version 4.3 မြှင့်တင်လိုပါက နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ဆားဗစ်ပညာရှင်ထံတွင်သာ မြှင့်တင်သင့်ကြောင်း သိရသည်။
Ref : http://www.myanmarinternetjournal.com
Android ဖုန်းပေါ်မှာ မိမိလိုသလို မိမိတို့ ရဲ့ ပုံလေးတွေကိုဆေးရောင်လှလှလေး .ပန်းချီဆန်ဆန်လေး..အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ( ၂၇.၁၂.၂၀၁၃ )ရက်နေ့ play store ပေါ်မှာရောက်ရှိလာတဲ့XnSketch Pro လေးပါ......မိမိတို့ ပုံကို ကြိုက်သလို အနူပညာဆန်ဆန်..ကာတွန်းပုံလေးတွေ ကိုအရောင်လေးတွေနဲ့ လုပ်မလားအလွယ်တစ်ကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်...အရင်ကခဲခြစ် အဆပေါင်းများစွာသာလွန်တာပြီး အသုံးပြုရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ...ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့7MB ပဲမို့ ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက်စွာချယ်မှုန်းနိုင်တော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်...မည်သည့် android အမျိုးအစာနှင့် မဆို သင့် လျော်ပြီး android version 2.2 နှင့် အထက်မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
zippyshare , solidfiles , tusfiles
နာမည်ကြီး 1 Click Root Tool လေးပါ ဖုန်းတော်တော်များများကို အလွယ်တကူ Root ဖေါက်နိုင်ပါတယ်.... Update Version လေးမို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
CD/DVDs ခွေပျက်တွေထဲက Data တွေကို 90% ထိ အလွယ်တကူ ပြန်ယူနိုင်မဲ့ Software လေးပါ.. အရင်ကတင်ပေးထားတာ Link အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ဒါရိုက် Link နဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
|Download CD Recovery Toolbox|
ဇင်: Skype မှာ မြန်မာ Font ထည့်ချင်လို့ပါ ဘယ်လိုထည့်ရမှန်းမသိလို့ တင်ထားတာရှိရင်လည်း Link လေးပေးပါလား အကို ကျေးဇူးပါ...။
ကွန်ပျူတာက Skype မှာ မြန်မာလို ရေးလို့ / ဖတ်လို့ ရအောင် Setting ချိန်နည်းလေးပါ.. မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. Skype မရှိသေးလို့ လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ ဒီနေရာက တဆင့် နောက်ဆုံး Version ကို ဒေါင်းယူနိုင်ကြပါတယ်.. (Offline Installer) ပါ...။
ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး နံပါတ်လေးတွေ အတိုင်း အစဉ်လိုက် လုပ်ပေးသွားရုံပါပဲ....
Tool ကို Click ပါ... ကျန်တာတွေ အားလုံးကိုတော့ အစဉ်လိုက်လုပ်ပေးသွားပါခင်မျာ... (ပုံတွေ သေးလို့ ရှင်းရှင်း လင်းလင် မမြင်ရဘူးဆိုရင် ပုံပေါ်ကို Click လိုက်ပါ)
Tuesday, December 31, 2013 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Monday, December 30, 2013 Unknown3comments
အားလုံး မျှော်လင့်နေကြတဲ့ MM Keyboard For iOS7+ ထွက်ရှိ လာပါပြီ
ယနေ့ MM Keyboard For iOS7+ ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်...။
Cydia ထဲမှာ http://cydia.macforus.com/ ကို အပ်ပြီးတော့ ဒေါင်းယူနိူင်ပါတယ် ။
စာရိုက်တဲ့အခါတွင် ပြဿနာတစ်ခုတွေ့ပါတယ် ( -ူ ) ရိုက်တဲ့အခါမှာ ရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ် ။
အသစ်ထွက်လာတဲ့ A7 တွေဖြစ်တဲ့ Pad Air / iPad Mini with Retina Display / iPhone 5S မော်ဒယ်တွေမှာ ထည့်မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် ။
(( တစ်ခုသတိပေးချင်တာကတော့ ။ ။ ဖုန်းရဲ့ စက်တင်ထဲမှာ TTKeyboard ရဲ့ Burmese ဆိုတဲ့ ရှော့ကပ်လေးကို သွားပြီးမပျက်ဖြစ်ပါနဲ့ ဖျက်မိရင်ပြန်ထည့်ဖို့စာမပါပါဘူး ။ ပြန်အင်စတောလုပ်ရပါမယ် ။))
Burmese ဆိုတာလေးကို ဖျက်ဖျက် မဖျက်ဖျက် MM Keyboard မှာ လိုက်ပေါ်ပေးနေပါတယ် ။
ပြောရရင် စာမျက်နှာ3မျက်နှာဖြစ်နေတဲ့သဘောပါ ။
Burmese ရှော့ကပ်လေးကို ဖျက်ထားမိခဲ့ရင်....
တကယ်လို့ မိမိက MM Keyboard ကိုအဆင်မပြေလို့မသုံးပဲ English နဲ့ Burmese နဲ့ပဲ စာရိုက်သုံးချင်ပါက ပြန်ချိတ်ဖို့ရန် တိုင်ပွတ်ကုန်ပါရော ။
ဖျက်ထားမိပါက Cydia ထဲမှာ ပြန်အင်စတောလုပ်ရပါမယ် ပြန်ပေါ်လာပါမယ် ။
မိမိက English နဲ့ MM Keyboard ကိုပဲ သုံးချင်ပါက...
Cydia ထဲမှာ TTKeyboard ကို Uninstall လုပ်ထားရပါမယ် ။
Pad Air / iPad Mini with Retina Display / iPhone 5S တွေအတွက်
Zawgyi Keyboard မရခင်လေးမှာ ဒီ Temporary Keyboard လေးကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် ။
မည်သည့် iOS7Jailbroken Device တွင်မဆို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် ။
ဒီလင့်မှာ သွားရောက်လေ့လာ၍ ဒေါင်းယူပါ..။
iOS7Jailbreak ရပြီးတဲ့နောက်မှာ iOS Device တွေအတွက် ( including iPhone 5s, A7 chips ) Zawgyi Keyboard မရခင်လေးမှာ ဒီ Temporary Keyboard လေးကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ....
မည်သည့် iOS7jailbroken device တွင်မဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ...
အခုကီးဘုတ်ကိုပြုလုပ်ရေးသားတဲ့သူကတော့ Dr. Myo Thet Han ပဲဖြစ်ပါတယ်..
iFile ကိုသုံးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်, iTools, iFunBox ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် /System/Library/Frameworks/UIKit.framework အောက်မှာ .plist လေးကိုထည့်ပေးပြီး Respring လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ..
D, F, G, H, J, V စတဲ့ Key တွေကို Long Press ပြီးရိုက်ရတာပါ, ဘယ် Keyboard ကိုမှထပ် add စရာမလိုပါဘူး
Download Link : http://cl.ly/3j3y1m0K2J14
Mirror Link : http://d.pr/f/WAes
Credit to Download Link : Sezin Lynn
Cydia မှာ Repo အပ်နည်းကို မသိသူများအတွက်
Cydia ထဲဝင်လိုက်ပါ >> အောက်နားက Manage ကိုဝင်ပါ >> Sources ဝင် >>
အပေါ်နားက Edit နှိပ် >> လင့်အပ်ရန်
ဘောက်တစ်ခုကြလာမယ် http://cydia.macforus.com/ လို့ရိုက်ပြီးအပ်လိုက်ပါ >> အပ်ပြီးရင်
Sources ထဲမှာ အဲဒီဆိုက်လေးရောက်နေပါပြီ ဝင်လိုက်ပါ >> အဲဒီဆိုက်ထဲက MM Keyboard
For iOS7+ ကို အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် General >> Keyboard >> International Keyboards >> Add New Keyboard
ထဲဝင် >> Czech ကိုရွေးလိုက်ပါ ဒါဆိုဖုန်းမှာ မြန်မာလိုလက်ကွက်ရသွားပါပြီ ။
Credit to: Djjoe Man
ပြည်တွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံး၏ အရောင်းရဆုံး ဟန်းဆက်များမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသည့် အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ထဲတွင် Huawei အမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက်များက အရောင်းရဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့များရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းများထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး အစရှိသည့် မြို့များ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Huawei အပြင် ZTE အမှတ်တံဆိပ် မိုဘိုင်းဖုန်းများက ယခုနှစ်၏ လူသုံးအများဆုံး ဟန်းဆက်များအဖြစ် ဈေးကွက်အတွင်း ယမန်နှစ်ကအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများက တညီတညွတ်တည်း ပြောသည်။
တရုတ်(တိုင်ပေ)မှ တင်သွင်းသည့် HTC အမှတ်တံဆိပ် ဖုန်းအိမ်များမှာမူ Huawei နှင့် ZTE တံဆိပ်များလောက် အရောင်းမသွက်သော်လည်း အရည်အသွေးပိုင်းနှင့် ဈေးနှုန်းပိုင်းတွင်မူ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက်များထက် သာလွန်မှုရှိသဖြင့် တတိယနေရာမှ လိုက်နေသည်ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင် အချို့က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးပိုင်းတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေသော်လည်း အခြေခံလူတန်းစား အများစုတတ်နိုင်သည့် နှုန်းထားများဖြစ်နေခြင်းကြောင့် Huawei နှင့် ZTE တံဆိပ်များကိုသာ အများဆုံး ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးစွဲသူများက ပြောသည်။ Huawei ကုမ္ပဏီသည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် အခြားမြို့များတွင် ၄င်းတို့၏ သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှု စင်တာများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ထိုအမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက်များကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ရန် ကြိုးစားနေသည်ဟု သိရသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာသော်လည်း အခြေခံလူတန်းစားများ၏ အရေအတွက်က ပိုမိုများပြားနေသောကြောင့် ဈေးနှုန်းသက်သာသည့် တရုတ်ထုတ် ဟန်းဆက်များကို လူသုံးများရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Huawei ကဲ့သို့သော တရုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်ကို အများဆုံး ရယူနိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိုဘိုင်းဖုန်းလုပ်ငန်းရှင် တချို့က သုံးသပ်ကြသည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ထုတ် Internet ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Monday, December 30, 2013 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
အင်တာနက် ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် အတွဲ (15) အမှတ် (1) ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့9ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
DVDFab 9.0.6.3 All-In-One [11 Softs in one!!] For [Lifetime]
Monday, December 30, 2013 Unknown 1 comment
DVDFab ကို သုံးဖူးသူတိုင်း သိကြမှာပါ.. Copy Protected လုပ်ထားတဲ့ DVD တွေကိုတောင် Copy ကူးလို့ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဒါ့အပြင် DVD, Bluray Disc တွေထဲက Data တွေကိုကူယူးခြင်း Rip, Convert, Decrypt,
and Crate ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စ,တာတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်..။
နောက်ဆုံး Latest Version တော့ မဟုတ်ပါဘူး All In One မို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.... Latest Version လိုချင်ရင်တော့ Comment,C-Box တွေကတဆင့်ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်...။
DVDFab All-In-One includes nearly all DVDFab options in it: DVD Copy, DVD Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper (3D Plus), Blu-ray to DVD, 2D to 3D Converter, DVD Creator, Blu-ray Creator, Video Converter, DVDFab HD Decrypter, and File Transfer.
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol(2), Issue (35)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Samsung Galaxy S4 (I9500) 4.3 THL (မြန်မာစာ ပါဝင်ပြီး)
Samsung Galaxy S4 Android 4.3 အတွက် Thai region နဲ့မြန်မာစာ Original ပါရှိပါတဲ့ Firmware ပါ....
အောက်က Link မှာ Resume နဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ကြပါတယ်..။
Credit : http://www.myanmarmobiletutorial.com
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 34 (30.12.13)
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Digital Life Journal Vol(2), Issue (34) ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ ရုပ်ရှင်အကောင်းဆုံး အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ ကို လက်ပံ ဇာတ်ကား နဲ့ ဥ ဇာတ်ကားတို့က လွမ်းမိုးခဲ့တာပါ။ ဒီနှစ်အကယ်ဒမီပေး ပွဲမှာဆိုရင် ၀ါနုတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေသာမက ၁၃ နှစ်ကြာ မပေးပဲ ထားခဲ့တဲ့ ကလေး သရုပ်ဆောင်ဆုကို ပါ ၂၀၁၂ အတွက် အကယ်ဒမီဆုပေးခဲ့ဖြစ် ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲကို စောင့်ကြည့် သတင်းယူထားတဲ့ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင် ကပြောပြမှာပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားဟာ အရင်နှစ်တွေနဲ့ မတူပဲ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ရုပ်ရှင်ဆိုတာဟာ အနုပညာ၊ စီးပွားရေး နဲ့ နည်းပညာတွေ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရှိနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပါ ဖိတ်ခေါ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါလို့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆုပေးပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
"ဆူလွယ်နပ်လွယ် ထုတ်လုပ်မှုများဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဈေးကွက် များမှာ ရေရှည်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်ကာလမှာ ကျနော်တို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အတွက်ဆိုရင် အနုပညာရှင်များနဲ့ တတ်သိပညာရှင်များအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ် လုပ်ငန်းအတွင်း ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြုတ်နှံသူများ ဝင်ရောက်လာအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ တင်ပြလိုပါတယ်။"
အကယ်ဒမီ သမိုင်းမှာ ရှားရှားပါးပါး ပေးလေ့ရှိတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု ကိုတော့ ၁၃ နှစ် အကြာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဆုပေးပွဲမှာ ပြန်ပြီးပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု နဲ့ အကယ်ဒမီ ရခဲ့တာဟာ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
"အခုလို ဒီဆုကို ရရှိဖို့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဟာ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အားပေးမှုတွေ ရာခိုင်နှုန်း အများကြီးပါဝင်တယ်လို့ သမီးယုံကြည်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တော်တော်များများကတည်းကမှ သမီးအတွက် သရုပ်ဆောင်ဆုအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရဖို့ မျှော်လင့်ပြီးတော့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်း သမီးရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်းသိမ်းထားပါ့မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။"
အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်ဆုကိုတော့ ပရိသတ် အများက မျှော်လင့် ထားတဲ့ ပြေတီဦးက ရရှိခဲ့ပြီးတော့ ဒုတိယအကြိမ် ရရှိခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ ရင်ခုန်နေရဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
"ကျနော် အရမ်းရင်ခုန်ပါတယ်။ ကျနော် ပထမတစ်ကြိမ်ထက် ဒီတစ်ကြိမ်ကို ဘာဖြစ်လို့မှန်းကို မသိဘူး။ အရမ်းကို ရင်ခုန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လက်ပံအဖွဲ့သားတွေ အတွက် အရမ်းကို ရင်ခုန်ပါတယ်။ မျှော်မှန်းမထားပေမဲ့ ဒီဆုကို ရရှိတဲ့အတွက် အရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာ အားပေးနေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးကို အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကိုတော့ ၀ါရင့် မင်းသမီးကြီးတွေ အကယ်ဒမီ စာရင်းပေါက်နေတဲ့ ကြားက ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်မဟုတ်တဲ့ ဖွေးဖွေးက ဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး အကယ်ဒမီဆု ဖြစ်လို့ မမျှော်လင့်ပဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆု တစ်ဆု ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖွေးဖွေးကပြောပါတယ်။
" ဒီကားကို ဖွေးလွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က ရိုက်ထားတာပါ။ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ သရုပ်ဆောင်အသစ်ပါ။ ဖွေးဖွေးကို ဘယ်သူမှလည်း မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ ဦးဝိုင်းက အကုန်လုံးသင်ပေးပါတယ်။ ပုံစံဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာတုန်းက ခံယူချက်က အနုပညာကိုချစ်တယ်။ ရူးသွပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကားကိုရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ အကယ်ဒမီတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖွေးဖွေး ပထမဆုံးနဲ့ အရမ်းကြိုးစားခဲ့တဲ့ကားပါ။ အရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ်။"
၂၀၁၂ ခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတတ်ပညာ ဆုတွေကိုတော့ အသံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကယန်းအလှ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားနဲ့ ဦးတိုနီလင်း၊ တေးဂီတ အကောင်းဆုံးဆု ကိုတော့ မွေခံထိုက်စေ ဇာတ်ကားနဲ့ ဂီတမှူး ၀င်းကို၊ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်မှုဆုကိုတော ဥ ဇာတ်ကားနဲ့ ဦးဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) ၊ အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံဆုကိုတော့ ကယန်းအလှ ဇာတ်ကားနဲ့ ဦးအောင်ကိုလတ်တို့ က ရရှိသွားခဲ့တာပါ။
အကယ်ဒမီအတွက် အဓိက အရေးပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆုနဲ့ ဒါရိုက်တာ ဆုတွေကိုတော့ တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ဇာတ်ကားနဲ့ ကလေး သရုပ်ဆောင်ဆု ကို ယွန်းယွန်း၊ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကိုတော့ ဥ ဇာတ်ကား နဲ့ ချောရတနာ၊ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကိုတော့ လက်ပံ ဇာတ်ကားနဲ့ ဖွေးဖွေး အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကိုတော့ ဥ ဇာတ်ကား နဲ့ ကိုဇော် (အာရုဏ်ဦး) တို့ က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွက် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာတော့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုနဲ့ အမျိုးသား ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆုကိုတော့ ချီးမြင့်ခဲ့ ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
၂ဝ၁၂ အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု၏ ၉ဆုအနက် ဥ ဇာတ်ကားဖြင့် ဒါရိုက်တာဆု၊ တည်းဖြတ်ဆုနှင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု ၃ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ကယန်းအလှဇာတ်ကားဖြင့် ဓာတ်ပုံဆုနှင့် အသံဆု ၂ခု ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုများအနက် အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ၂ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် ဇာတ်ညွှန်းဆုလည်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
၁။ အသံဆု - တိုနီလင်း (ကယန်းအလှ)
၂။ ဂီတဆု - ဝင်းကို (အမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေ)
၃။ တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း-ဟံသာမြေ (ဥ)
၄။ ဓာတ်ပုံဆု - အောင်ကိုလတ်(ကယန်းအလှ)
၅။ အထူးဆု - ယွန်းယွန်း (တိမ်မင်းသမီးရဲ့ဒဏ္ဍာရီ)
၆။ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ပြေတီဦး (လက်ပံ)
၇။ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ချောရတနာ (ဥ)
၈။ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ဖွေးဖွေး (လက်ပံ)
၉။ ဒါရိုက်တာဆု - ကိုဇော်-အရုဏ်ဦး (ဥ)
Ref : ကုမုဒြာ
Monday, December 30, 2013 Unknown6comments
Wondershare Video Editor 3.1.6.0 Full Crack (Video ဖိုင်လ်တွေ ဖြတ် / ဆက် လုပ်ချင်ရင်)
Monday, December 30, 2013 Unknown2comments
ဒါလေးက Video Editor လေးပါ... Video တွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် ဖြတ်/ဆက် , သီချင်းထည့် , စာတန်းထိုး စ,တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
မိမိချစ်သူကို ပုံလေးတွေနဲ့ Slide Show လုပ်ချင်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါသေးတယ်။
Wondershare Video Editor - an easy-to-use video editor with all the video editing tools you need, allows you to create Hollywood-like home movies with text, filter, motion and transition effects from all regular videos, audios and photos. Besides, you can directly upload your video to YouTube for sharing with family and friends, save videos for playback on portable devices like iPhone, iPad, iPod, etc. or burn DVD for better video preservation. No matter it’sawedding video, love movie, travel story, life documentary or party record, it is just so easy to turn it toatreasured home video and share it with everyone!
Compatible with Windows 8.1;
Wondershare Video Editor 3.1.6.0 Full
Wondershare Video Editor 3.1.6.0 (Portable)
▼ 2013 (3269)
DVDFab 9.0.6.3 All-In-One [11 Softs in one!!] For ...
Microsoft Office 2007,2010 Product Keys များစုစည်း...
အသုံးဝင်တဲ့ run box မှတိုက်ရိုက်ဖွင့် နိုင်တဲ့c...
The Hobbit- The Desolation of Smaug (2013) Movie
Bitdefender Total Security 2014 & License Key Till...
How to Change System Language in Window7(System ...
နိုင်ငံတကာမှ သုံးစွဲသူများကို Cloud သိုလှောင်မှု 10...
Drive Clone ဆိုတဲ့ Software လေး (FarStone DriveClo...
Hide All နေရာတွင် Unfollow ခလုတ်ဖြင့် Facebook အစာ...
၂၀၁၄ တွင် 20 megapixel ကင်မရာ ပါဝင်သည့် စမတ်ဖုန်း ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော် အရှင်ဝိ...
တန်ဖိုးနည်းမိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရေအတွက် သုံးသန်းကျော်...
၂၀၁၄ မော်ဒယ် Lexus GX
FishdomHarvestSplash ( PC game )
How to Root Samsung Galaxy Tab310.1 P5200/P5210...
USB Flash Drives နဲ့ Memory card တွေမှ Shortcut V...
iOS7Evasi0n Jailbreak Tool ကိုရှောင်ရှားသင့်ကြော...
နောက်ထပ်အလန်းလေးနဲ့ Christmas live Wallpaper ( for...
လေးဖြူ (သံသယကြိုး) MP3
evasi0n မှ တရားဝင်တောင်းပန်ခြင်း (Jailbreake)
window 8.1 မှာ system rating ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဝင်းဒိုး images ဖိုင်တွေကို USB Pendrive တွင် ထည့်...
samsung galaxy note2N7100 ကို 4.3 jelly bean တင်...
ကွန်ပြူတာသည် သုံးသည့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ နှေးလ...
Windows 8.1 Pro / Enterprise Activate ပြုလုပ်နည်း...
CCleaner Professional v4.09.4471 Full + Crack ( fo...
KASPERSKY INTERNET SECURITY 2014 14.0.0.4651 c FIN...
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းအား စုစုပေါင်း သိန်း (...
အမိုက်စား Launcher လေးဖြစ်တဲ့Windows8 / Windows 8 ...